Ray aman-dreny tia zanaka lehibe
Ny reny mankafy dia mampitombo ny fahombiazana sy ny ankizy sambatra
Ny ray aman-dreny dia mametraka fanontaniana maro ho an'ny ray aman-dreny. Na dia betsaka aza ny fampahalalam-baovao, mbola tsy mora ny valiny. Ao an-tampon'ny fanontanian'ny ray aman-dreny, ny toetra toy ny zaza dia mahomby, tony, matoky, salama ary sambatra. Maro no mino fa tsy misy ny fanabeazana sy fankatoavana miaramila, ny zaza dia tsy hahavita vokatra tsara. Ny fisehon'ny fitiavana sy ny fitiavana tafahoatra, indrindra ho an'ny ankizilahy, dia afaka manisy ratsy ihany.
Milaza anefa ny mpahay siansa fa mihalehibe ny reny be fitiavana sy be fitiavana. Ny mpanoratra sady bilaogera Sandy Schwartz, izay manoratra momba ny fampiofanana zaza, dia milaza ho porofo ny fandalinana ireo psikology Amerikana. Ny fitiavana sy ny fikarakarana ny ray aman-dreny dia manana fiantraikany tsara eo amin'ny fiainan'ny ankizy iray manontolo ary mamaritra fifandraisana maharitra sy maharitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ilay zaza. Ary, mifanohitra amin'izany, ireo ankizy izay mampiseho herisetra sy fihetsika manohitra ny fiarahamonina dia mety hahatsapa ny tsy fahampian'ny fitiavana ny ray aman-dreniny.
Noho izany, ampidiro matetika ny zanakao mba tsy hanao izany.)
Nahoana ireo ray aman-dreny be fitiavana no mahasambatra sy mahomby indrindra?
Ny ray aman-dreny rehetra dia manana fiainana sarotra sy be atao, ampiana zavatra maro momba ny fitaizana zaza. Na izany aza, ny iray amin'ireo adidy manan-danja indrindra amin'ny ray aman-dreny dia ny fahafahanao mijanona amin'ny fotoana ary manaiky ny zanakao amin'ny fitiavana. Ny fianarana nandritra ireo folo taona farany dia naneho mazava ny fifandraisana misy eo amin'ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny zaza sy ny fahasalamany ary ny fahasambarany amin'ny olon-dehibe.
Ireo Ankizy Trends, ny mpitarika fikambanana fikarohana US dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fanantenana sy ny kalitaon'ny fiainana ny ankizy, ny tanora sy ny fianakaviany dia manamafy fa ny hatsaram-panahy sy ny fitiavana nasehon'ireo ray aman-dreny mamoa mandritra ny fiainan'ny ankizy. Fa raha ny ray aman-dreny tsy malemy fanahy, ny zaza dia mety ho namorona ambany fiheverany ny tenany; dia hahatsapa ny fahatsapana ny fahafoizako, fankahalana, masiaka sy tia miray hina.
Tao anatin'ireo taona faramparany, dia nisy fianarana siantifika mihoatra ny iray nanamafy ny fifandraisana misy eo amin'ny fitiavan'ny ray aman-dreny sy ny fomba hahatratrarana ny fahasambarana sy ny fahombiazana amin'ny ankizy.
Tao amin'ny 2010, ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Duke University dia nahita fa ireo zanaka be fitiavana sy be fiahiana dia mihalehibe kokoa kokoa sy matanjaka kokoa ary tsy dia manahy loatra ny olon-dehibe.
Ny fandinihana dia nahitana ireo mpandray anjara 500, izay notsaboina hatramin'ny fahazazana hatramin'ny taona 30. Raha tao anatin'ny volana 8 izy ireo, dia nijery ny fifandraisan'ireo renim-pianakaviana ny mpahay siansa, ary nitarika fitsapana maro koa.
Ny psychologists dia nanisy ny fitiavan'ny reniny sy ny fiheverany ny ambaratongan'ny 5 - avy amin'ny "ratsy" ka hatramin'ny "mpangalatra". Momba ny 10% ny renim-pianakaviana dia mampiseho ambany endrika ambany, 85% - ny haavony mahazatra, ary ny 6% - avo.
Taorian'ny taona 30 nandritra ny taon-jato, dia efa nanontaniana ny olona noho ny fahasalamany ara-pihetseham-po. Ireo mpandray anjara izay miahy na mikarakara be azy ireo dia tsy dia matahotra loatra ny adin-tsaina sy ny tebiteby. Ankoatra izany, dia tsy dia atahorana loatra ireo olana ara-pihetseham-po toy ny fialamboly, ny tahotra ny fifandraisana ara-tsosialy sy ny soritr'aretin'ny psychosomatic.
Ireo mpahay siansa izay niasa tamin'ity fianarana ity dia tonga nanatsoaka hevitra fa tokony handray io hormonina io ny mpandray anjara amin'ny hormonina oksitocine. Oxytocine dia singa simika ao amin'ny atidoha izay novokarina tamin'ny fotoana nahatsapan'ny olona iray fitiavana sy fitiavana. Voaporofo ihany koa fa nandray anjara tamin'ny dingam-pifandraisana teo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izy, ka niteraka fahatokisana sy fanohanana teo amin'izy ireo. Ity fifandraisana ity, izay azo inoana kokoa, dia manampy ny atidohantsika mamokatra sy mampiasa oxytocine, mba hahitana fihetseham-po kokoa ny ankizy.
Ny fanadihadiana faharoa dia natao tao amin'ny 2013 avy amin'ny mpiasan'ny University of California, Los Angeles. Ny mpahay siansa dia nanaporofo fa ny fitiavana sy ny firaiketan'ny ray aman-dreny tsy misy fepetra dia mety hahatonga azy ho sambatra sy ho be fanantenana. Izany dia satria ny atidohany - na kely na kely - dia miova eo ambany fitarihan'ny fitiavan'ny ray aman-dreny. Ny zaza tsy ampy taona sy ny tsy fahampian'ny fiankinan-doha, eo anelanelan'izany, dia misy fiantraikany amin'ny ankizy ara-tsaina sy ara-batana. Izany dia mety hitarika olana amin'ny toe-tsaina sy ara-pihetseham-po ary mahakasika ny zaza mandritra ny androm-piainany. Ankoatra izany, ny mpahay siansa dia mino fa ny fitiavan'ny ray aman-dreny dia miaro ny ankizy amin'ny voka-dratsin'ny fihenjanana.
Ny fandalinana ny Oniversiten'i Notre Dame, izay natao tao amin'ny 2015, dia naneho fa ny ankizy manana ray aman-dreny be fitiavana dia faly kokoa amin'ny olon-dehibe. Ny fandinihana dia nizara mihoatra ny mpandray anjara 600. Nanontaniana momba ny fahazazana izy ireo, momba ny fampiofanana, anisan'izany ny habetsahan'ny ray aman-dreniny naneho fitiavana azy ireo. Ireo mpandray anjara izay tia bebe kokoa amin'ny fahazazany dia tsy dia niahiahy loatra momba ny fahaketrahana, ny tebiteby, ary amin'ny ankapobeny dia sakaiza kokoa izy ireo. Ireo izay tsy dia tia loatra, dia nijaly noho ny olana ara-tsaina. Matetika izy ireo no kivy noho ny tsy fahombiazan'ny fiainam-piarahamonina ary tsy dia azoazoko loatra amin'ny fomba fijerin'ny hafa.
Ny mpikaroka koa dia nandinika ny soa ho an'ny fifandraisana ara-batana ho an'ny zaza. Ity fifandraisana manokana misy eo amin'ny reny sy ny zaza, indrindra indrindra, dia manampy ny hampitony ny zaza - noho ny fifandraisana, mitomany kokoa sy matory tsara kokoa izy ireo. Nasehony koa fa ny fifandraisana ara-batana dia manampy amin'ny fivelaran'ny atidoha. Araka ny lazain'ny Scientific American, ireo ankizy izay mitombo ao amin'ny trano fitaizana zaza kambana dia manana cortisol (hormonina hentitra) kokoa noho ny ankizy miaina miaraka amin'ny ray aman-dreniny. Mino ny mpahay siansa fa ny tsy fisian'ny fifandraisana ara-batana amin'ny trano fitaizana zaza kamboty no tena fototry ny fiovana ratsy.
Farany, ny fandinihana marobe momba ny fiantraikan'ny fanasitranana dia mampiseho fa misy fiantraikany amin'ny ankizy izany ary manampy amin'ny fampihenana ny tebiteby. Ny fampihetseham-batana koa dia fomba tsara hifandraisana ny ray aman-dreny sy ny zanaka - na ara-batana na ara-pihetseham-po. Manomboka amin'ny zaza tsy ampy taona, ny ray na reny iray dia afaka manasitrana zaza iray, ka mahatonga azy ireo hifandray akaiky amin'izy ireo. Ny fianarana dia naneho fa ny ankizy sy ny olon-dehibe izay voapanga dia tsy dia atahorana loatra mandritra ny fanadinana, ny hopitaly ary ny toe-javatra hafa mampiady saina.
Hatramin'ny fotoana nentinao navoakan'ilay zaza avy tany amin'ny hopitaly, azonao antoka fa hitazona izany eo an-tananao izany, hikasika azy ary atsipazo eny an-tsandrinao. Miezaha hifandray matetika aminy matetika (hoditra amin'ny hoditra).
Rehefa mihalehibe ny ankizy, milalao lalao miaraka aminy - mandihy miaraka na mihomehy fa masira miforitra / manoroka.
Asio fampahatsiahivana ao amin'ny telefaoninao fa ny fofona dia ampahany amin'ny fiainanao andavanandro. Ao amin'ilay sarimihetsika "Trolls" vao nivoaka vao haingana, ireo trolls dia nanara-maso ny fanairana, izay isaky ny ora dia nanamarika fa fotoana handraisana izany. Raha izany no ilainao, alaivo ny fanairana. Na tsy manadino ny hamihina ny zanakao amin'ny fotoana sasany amin'ny andro, ohatra, alohan'ny handehanany any am-pianarana, rehefa miverina any an-trano izy ireo ary alohan'ny hatory.
Hevitra iray hafa mahaliana dia ny fampiasana fitiavana rehefa manabe ankizy. Rehefa miteny aminy ianao hoe inona no nataony, dia asio eo an-tsorok'izy ireo ny tanany ary hamihina amin'ny faran'ny resaka. Tokony hahatakatra ny ankizy: na dia tsy faly amin'ny fihetsiny aza ianao, mbola tia azy ireo. Raha nandratra ny rahavaviny na ny anadahiny ny zanakao, dia nanofahofa azy ary nanazava fa ny fialamboly dia tsara kokoa noho ny ady.
Farany, mitandrema mba tsy handratra na hamehy ny zanakao amin'ny fitiavanao. Jereo ny lanjany manokana, ary tadidio fa miovaova arakaraka ny dingana samihafa amin'ny fampandrosoana.